Hiran State - News: HS:-Soomaali ma heli karaan madax ka madax banaan musuqmaasuq?
HS:-Soomaali ma heli karaan madax ka madax banaan musuqmaasuq?
Musuqmasuq waa Soomaali waxa Dhibaatada ugu bixi la.dahay ee ma is hagaajinaa mise meesha waan ku kala tagnaa
Somali ma heli karaan madax ka madax banaan musuqmaasuq iyo isdaba marin?
Waa mid inay ogaadaan madaxda Soomaaliya in mucaawino walbo dawladii bixisay inay Banki Caalami ah marsiiso ka dib warbixin siiso bankiga gobolkooda ama qaaradooda si miisaniyadooda iyo dhaqdhaqaaqa lagactooda loola socdo. Waxaa haboon in maamul wanaag la qaato qarsoodiga laga baxo.
1)Madaxda Dawladda waa inaysan qaadan Karin hadiyad ka badan $100.00 marka ay la kulmaan Madaxda Dunida wixii mucaawinad ah ee dibedda laga helo waa in laga diwaan geliyo wasaaradda Maliyadda iyo Arrimaha Dibedda iyo Bankiga dhexe ee Soomaaliya
2) Bankiga Dhexe ee dawladda waa inuu noqdaa khasnadda dawladda uruurinta Dakhilga iyo bixintana waa inay ka timaaddaa wasaaradda Maaliyadda oo hab Voucher wax kasto ku baxaan. Wasaarad Walba iyo hayad walba siday wax u bixisay waa inay keentaa xisaab xir 3 biloodle ah..
3) Warbixinta ku saabsan miisaniyadda waa in 3 billod walba baarlamaanka guddiga Dhaqaalaha la hor keeno lona sheego wixii baxay iyo khasnadda wixii ku harsan. Guddiga dhaqaalaha waa inaysan sirta dawlada warbaahinta ka siideyn.
4) Diwaan Gelin Qaran ee hantida Dawladda in la sameeyo
5) Abuurista Xafiis xur ah oo baara xisaabaadka Dawladda in la sameeyo
6) Waa in Madaxda sare ee dawladda loo qoro mushaar fiican si aysan musuqmaasuq u gelin
Xisaabta ku maqan Madaxda Soomaaliya:
1- Shekh Shariif Sh Axmed $38,000,000 President of Somalia
2- Sharif Xasan $37,000,000 Minister of Finance/Speaker of parliament
3- Cumar Cabdirashid $3,000,000 Prime Minister of Somalia
4- Maxamed farmaajo $1.800, 000 Prime Minister of Somalia
5- Abdiraxmaan Ibbi $2.100,000 Minister of Fisheries
6- Munye $13,000,000 Head of Italian AID FAI keeper of Somalia Ships
7- Cabdiweli $2,648,000 Prime Minister of Somalia
8- Cabdikariim Jama $1,200,000 Minister of Post & Information/ Chief of Cabinet
9- Abdiraxmaan Jurile $3,800,000 Minister of Post /Comm/ Italian Aid FAI
10- Cali Geedi $27,000,000 Prime Minister of Somalia
11- Nuur cadde $1,400,000 Prime Minister of Somalia
12- Cabdullaahi Yusuf (AUN) $540,000 President of Somalia/Puntland
13- Cabdiraxmaan farole $4,600,000 president of Puntland
14- Cabdiqaasim Salat $6,600,000 President of Somalia
15- Cali Mahdi $4,300,000 President of Somalia
16- Dahir Riyale $2.500,000 President of Somaliland
17- Ahmed Silaanyo $1,200,000 President of Somaliland
Warbixintaan waa mid horudhac ah oo dhawaan si rasmi ah ay u soo bandhigi doonaan gudi baaritaan ku haya madaxda Soomaalida waxaana ay ku qoran tahay dhawr luqadood dhaqaalaha la sheegayo iney ku maqan yahiin madaxda maanta hor boodeysa Soomaaliya iyo rag xilal muhiim ah dalka horey ugu soo qabtay.
Corruption Report Somalia
· admin on June 06 2012 19:51:13 · 0 Comments · 1682 Reads ·
14,589,005 unique visits